Logo Universal - Video Drop
DJ video intro amin'ny endritsin'ny logo manerantany. Fialam-boly malaza, mahagaga dia mamerimberina sary an-tsaina miaraka amin'ny anaranao DJ sy lahatsoratra an-tsoratra. Ity horonantsary DJ ity dia azo antoka ny hisarika ny sainy. Lehibe toy ny DJ intro amin'ny fiandohana na ny foto-kevitrao, ny hanakatona ny alina na, eritrereto, eo afovoany. Tahaka ny dipoavatra DJ rehetra sy ny DVD-nao dia lahatsary avo lenta, avo lenta, High Definition. AOKA hizara ampahany amin'ny lehilahy na vavy manokana ny horonan-tsary amin'ny $ 50.
SKU: Universal Sokajy: Specials Products
DJ video intro amin'ny endritsin'ny logo manerantany. Fialam-boly malaza, mahagaga dia mamerina mialoha ny anaranao DJ sy ny lahatsoratra an-tsoratra. Ity horonantsary DJ ity dia azo antoka ny hisarika ny sainy. Lehibe toy ny DJ intro amin'ny fiandohana na ny foto-kevitrao, ny hanakatona ny alina na, eritrereto, eo afovoany. Tahaka ny dipoavatra DJ rehetra sy ny DVD-nao dia lahatsary avo lenta, avo lenta, High Definition. AOKA hizara ampahany amin'ny lehilahy na vavy manokana ny horonan-tsary amin'ny $ 50